တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအချိန်မီပြီးစီးရေး အတွက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း Welcome to University of Traditional Medicine(UTM), Mandalay .This web site is launched on 11.11.2019.( ၁၃၈၁ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ တွင်လွှင့်တင်သည်။)
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအချိန်မီပြီးစီးရေး အတွက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
ယနေ့(၂၅-၆-၂၀၂၀)ရက်နံနက် ၈း၃၀ အချိန်တွင် တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအချိန်မီပြီးစီးရေး အတွက် ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာလှမိုး၊ အမျိုးသားလွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသန်းဝင်း၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာသိန်းဇော်လင်း(ပါမောက္ခချုပ်)၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(စီမံ)၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်(သင်ကြား)၊ မော်ကွန်းထိန်း ၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်
တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး၊ ဆေးရုံအုပ်၊ စက်ရုံမှူး နှင့် Third Party တာဝန်ရှိသူများ မြို့နယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်စိစစ်ကော်မတီဝင်များ နှင့်အတူ
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လာရောက်ခြင်း	12 August 2020
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေးသို့ UTMAA တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား‌‌ေဟာင်းအသင်း မှ အသင်း နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တန်ဖိုး ‌ငွေ (၄၁၄၀၀၀) ကျပ် လေးသိန်း တစ်သောင်း လေးထောင်ကျပ် တန်ဖိုးရှိ Projector တစ်လုံးအား လှူဒါန်း	12 August 2020
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ အချိန်မီ ပြီးစီးရေး 3rd party QC အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲ	12 August 2020
Day-2 of Third Internal Protocol Board for MMTM First year students ဆက်လက်ကျင်းပ	12 August 2020
တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော Zoom Meeting အခမ်းအနား တက်ရောက်	12 August 2020
2019 © University of Traditional Medicine Mandalay, Myanmar. All Rights Reserved. | Themes by Agethemes | CM by K Network Web Services.